Browse Awesome Course From Us...
Currently not scheldue.
"သင်အခြေခံရှိပြီးသားဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တတ်လှမ်းဖို့ လှေကားသစ်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်" သင်တန်းပြီးဆုံးပါက On Job Training အနည်းဆုံး ၁လ ဝင်ရောက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်။ PHP Advance with MVC Framework (Intermediate) Course ကိုယ်ပိုင် Customize framework တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးမည့် PHP Advance with MVC Framework (Intermediate) course PHP Advance with MVC Framework (Intermediate) Course -------------------------------------------------------------------------------- ကျွန်တော်တို့ Web developer လောကမှာဆိုရိုးစကား တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ “DRY တဲ့ (Don’t Repeat Yourself) ပေါ့။” သင့်အနေနဲ့ကော တစ်ခါရေးပြီးသား code ကို နောက်တစ်နေရာမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ Repeat လုပ်နေရတာဟာ project ကိုပိုမိုကြန့်ကြာစေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခါစ အတွေ့ကြုံမရှိသေးသော developer အများစုမှာတွေ့ရပြီး ဒီလိုအလေ့အကျင့်ဟာ လုပ်သင့်တဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ code တွေရေးတတ်သော်လည်း code base များလာတာနှင့်အမျှ error တွေများလာမယ်ဆို project ပြီးစီးရာမှာနှောင့်နှေးနိုင်ပါသည်။မိမိ code ကို သာမန်ရေးနေကြအတိုင်းရေးမယ့်အစား MVC flow ကျကျရေးသားမယ်ဆို အခြားသူများနှင့် ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်လူ နားလည်လွယ်ပြီး အချင်းချင်းလုပ်ဆောင်ရာ မှာပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Tulip Innovative Technology မှထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် PHP Advance with MVC Framework course တွင်အောက်ပါအကြောင်း အရာများကို အသေးစိတ်သင်ကြားပေးပါမည်။ တတ်ရောက်သင်ကြားလိုပါက သင်တန်းချိန်များ မှာ --------------------------------------------- Week day Class Section (C) (Tue to Thu) - တစ်ပတ် ၃ရက် -၂လခွဲ သင်တန်း၊ (4:00 PM to 6:00 PM) တစ်ရက် ၂နာရီ ဖြစ်ပြီး ၂လခွဲ တက်ရောက်ရပါမည်။ သင်တန်းကြေးမှာ 2သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "တစ်တန်းလျှင် ၁၀ဦးသာ လက်ခံသင်ကြားပေးမှာမို့ (28.8.2018) နေ့တွင်ဖွင့်မည့်အတန်းကိုလူမပြည့်ခင် register အမြန်လုပ်ထားလိုက် တော့နော်" Course Outline --------------------- 1. Getting Start with PHP PDO 2. Project Setup with PDO 3. Understanding the PHP OOP Concept 4. Structure of MVC 5. Route 6. Building Model,View,Controller 7. Creating Useful Own Function,Class,Trait 8. Web Security 9. How it work (Laravel, Codeigniter) 10.Making Own Framework Course Description --------------------------- ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ php project တွေကိုတည်ဆောက်ရာမှာ database connection ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် php procedural ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ယခုလို php procedural ကိုအသုံးပြုရာမှာ နည်းပညာအားနည်းချက်ရယ်လို့ ကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့ database အနေနဲ့ mysql တစ်မျိုးတည်းကိုသာ လက်ခံအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် အခြား database နည်းပညာများ ဖြစ်ကြတဲ့ oracle နဲ့ Microsoft database system တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထို့ကြောင့် database system ၁၂မျိုးထိ လက်ခံ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် PDO system ကိုရှင်းပြပေးပါမည်။ သာမန် procedural ရေးနည်းနှင့် PDO ရေးနည်းနှိုင်းယှဉ်ကာ database system အမျိုးမျိုးချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်သော PDO လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြင် MVC flow အရလိုအပ်သော model အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အသုံးချပုံ၊controllerအလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အသုံးချပုံ ၊ view အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အသုံးချပုံ များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြကာ Model – view – controller ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကို လက်တွေ့ဆွေးနွေးရှင်းပြပေးသွား ပါမည်။ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ php function များကိုသင်ကြားပေးသွားပါမည်။MVC flow ကိုနားလည်ပြီဆိုလျှင် အခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သော အသေးစား framework တစ်ခုတည်ဆောက်ပြကာ လက်တွေ့အသုံးချရှင်းပြသွားပါမည်။ အခြားသင်တန်းများနှင့်မတူ လက်တွေ့ project များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်တတ်သော error များကို ကိုယ်တိုင်ရှာပြီး၊ပြင်ဆင်နိုင်ဆောင် သင်ကြားပေးချင်း၊ online မှလိုအပ်သော source များ ရှာဖွေပုံကိုလဲ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၀င်ရောက်သောအခါ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရာတွင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဆရာများကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နားမလည်သော စာများကိုလဲ အချိန်မရွေး သင်ကြားနေစဉ်သော်လည်း ကောင်း၊အတန်းချိန်ပြင်ပတွင်လဲ သင်တန်းကျောင်းသို့လာရောက်မေး မြန်း၍သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် မေးမြန်းလိုပါက သင်တန်းကျောင်းသို့ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆွေးနွေးမေးမြန်း၍သော်လည်းကောင်း တိုင်ပင် နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တတ်ရောက်သင်ကြားလိုသူများ အနေဖြင့် week day အတန်းခွဲသစ်ကို့ (28.8.2018)တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ ★ဤသင်တန်းမှဝန်ဆောင်မှုပေးသောအားသာချက်များ ———————————————————— 1.သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး သေချာနားလည်မှုမရှိပါ နောက်တစ်ကြိမ်အခမဲ့ပြန်လည်တတ်ရောက်နိုင်ခြင်း။ 2.သင်တန်းကြေးနှစ်ဖြတ်ခွဲသွင်း၍ရခြင်း။ 3.သင်တန်းသား(၃)ဦးအတူတကွလာရောက်အပ်နှံပါက တစ်ဦးလျှင် 5% Discount ပေးအပ်ပါမည်။ 4.UCSY & IT major ကျောင်းသားများ (2)ဦးအတူတကွလာရောက်အပ်နှံပါက 5% Discount ပေးအပ်ပါမည်။ 5.သင်တန်းသားများဘက်မှစက်ပစ္စည်းအဆင်မပြေပါက သင်တန်းကျောင်းရှိစက်များဖြင့်သင်ကြားပေးပါမည်။ 6.သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး အရည်ချင်းပြည့်မှီသော ကျောင်းသား/သူများကိုသင်တန်းကျောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော web development company များတွင် On Job Training (OJT) စီစဉ်ပေးခြင်း။ ★သင်တန်းကြေးမှာ (၂သိန်း )ဖြစ်ပါသည်။★ သင်တန်းကာလမှာ ----------------------- (week days (Tue to Thu)) ကာလ အတွက် (၂လခွဲ) ဖြစ်ပါသည်။ *စည်းကမ်းချက်များအနေဖြင့်* ------------------------------------- 1.တစ်ဦးချင်း ကိုယ်ပိုင် Project ပြီးစီးအောင် ပြုလုပ်နိုင်မှ သာ ၊ 2.သင်တန်းတတ်ရောက်ချိန် မှန် မှသာ Certificate ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 3.သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး အရည်ချင်းပြည့်မှီသော ကျောင်းသား/သူများကိုသာ သင်တန်းကျောင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော web development company များတွင် On Job Training (OJT) စီစဉ်ပေးပါမည်။ သင်တန်း စုံစမ်းရန် နှင့် အပ်နှံ လိုပါက ------------------------------------------------ Tulip - Professional Web development Training Center - တိုက် ၅၈ ၊ 5လွှာ ၊ အခန်းနံပါတ် (5B) ၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်၊လှည်းတန်းနှင့်စံရိပ်ငြိမ်ကြား၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန် သို့လူကိုယ်တိုင် လာရောက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမေးမြန်း အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေး မေးမြန်း စုံစမ်းလိုပါက #Tulip - Professional Web Development Training Center Phone: 09 971571397 /09 425012864 သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ web programming skill ကို next level သို့မြှင့်တင်ဖို့တွေးနေပြီလား ? Web base IT company ကြီးတွေမှာ လုပ်ငန်းတွေပိုမို မြန်ဆန်စေဖို့ framework တွေသုံးရတာကြောင့် framework environment များနှင့်ရင်းနှီးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Framework အများကြီးတွေထဲက လက်ရှိ perfect ဖြစ်နေတဲ့ laravel framework ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့စိတ်ကူးရှိနေပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Tulip Innovative Technology မှဖွင့်လှစ်သော Framework with Laravel course နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ Course Description ကျွန်တော်တို့ Tulip Innovative Technology မှာ Laravel framework ကိုမလေ့လာခင် ရှေ့ပြေး သိသင့် သိထိုက်တဲ့ advance php essential ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ framework အားလုံးနီးပါးရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေ၊ဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊အလုပ်လုပ်ပုံတွေ နားလည်သဘောပေါက်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ laravel framework ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ method () တစ်ခုချင်းစီကို လွယ်ကူနားလည်စွာ အသုံးချတတ်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ -Laravel framework ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ -Database များနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံ -Model နှင့် Controller များကိုဖန်တီးပြီး result များကို view ပေါ်တွင်ဖော်ပြအလုပ်လုပ်ပုံ -Web security ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာကနေ ပါဝင်တဲ့ laravel middleware အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် auth အလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် -Laravel ၏ magic method () များကိုအသုံးပြုပြီး project များကို အချိန်တိုအတွင်း မည်သို့ရေးရမလဲ ဆိုတဲ့အဆင့်ဆင့်ကို သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေပဲလား……..မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ Tulip Innovative Technology မှာ သူများရေးသားပြီးသား framework ကို သုံးတတ်ယုံတင်မဟုတ်ပဲ framework ကိုလိုသလို အသုံးချပြီး ကိုယ်ပိုင် အသေးစား framework တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။